1. Anyị na- na-a ọkachamara mmebe na emeputa nke a dịgasị iche iche nke nyo isi factory.
2.Our ụlọ ọrụ nwere afọ 20 nke ahụmahụ na mmepụta na mmepe, na mmepụta nke ulo oru nyo ọcha nwere ike iru 2000 nkeji kwa ụbọchị.
3.With oge a mmepụta akụrụngwa, n'okpuru premise nke ime support, anyị iwekota elu mma onwunwe, na ngwaọrụ ị nweta, mmepụta nhazi na àgwà nke okokụre ngwaahịa nabata njikọ eme enweghị nkebi convergence, n'okpuru premise nke nkwa àgwà ngwaahịa, iji hụ na-adọ nnyefe, nwere ike nye ndị ahịa ndị kasị asọmpi ahịa.
4.Our ngwaahịa na-nọgidere innovated, ọhụrụ na ngwaahịa ndị na shelves, ọtụtụ na-ekpo ọkụ ngwaahịa dị maka ndị ahịa ịhọrọ site na dị iche iche mkpa, Online adọ reply, offline nkwurịta okwu, na anyị ga-eme ike anyị iji na-enye oru oma ozi ahịa.
5.Provide ngwaahịa ngwugwu dị ka ndị ahịa chọrọ, enye omenala ika ọrụ n'ihi na ndị ahịa.
6.Our ụlọ ọrụ na-nwere a nwere a elu-edu ahịa otu, lọjistik otu na akwụkwọ, anyị na ahia mkparita uka, mbubreyo iji nsuso na lọjistik njem njikọ na-enwe ike iji nweta a enweghị nkebi docking, iji nye ndị ahịa nke kacha mma mma ọrụ ịtụ iji nweta.